Mukhtaar Roobow oo Xabsiga laga soo deynayo - Idman news
Mukhtaar Roobow oo Xabsiga laga soo deynayo
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda dedaalo ay wadaan siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, kuwaa oo doonaya in ay xabsiga kasoo saaraan Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur.
Xabsi ay maamusho Hay’adda Nabad Sugida Soomaaliya oo kuyaalla maagaalada Muqdisho waxaa muddo saddex sanno ka badan ku xiran Sheekh Mukhtaar Rooblw Cali Abuu Mansuur oo horey uga soo goostay Al Shabaab isuguna dhiibay dowladda.
Abuu Mansuur ayaa u xirnaa arrimo siyaasadeed iyo in uu damcay in uu madaxweyne ka noqdo maamulka Koonfur Galbeed, waxaana magaalada Baydhabo kasoo xiray isaga oo musharax ciidamada Itoobiya ee halkaasi joogay.
Tan iyo markii uu meesha ka baxay Madaxweyne Farmaajo lana doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa bilowday dadaalo la doonayo in xabdsiga looga soo saaro Abuu Mansuur, waxaana hada rejo weyn laga qabaa in Abuu Mansuur xabsiga laga soo saaro.
Siyaasiyiin aad ugu dhaw Sheekh Roobow ayaa Jimcihii ku booqday goobta uu ku xiran yahay waxa ayna siyaasiyiintan ugu laab qaboojiyeen Abuu Mansuur in dalka isbadal ka dhacay uuna dhawwaan xabsiga kasoo bixi doono.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey ugu dhaliilay dowladda Farmaajo xariga sharci darada ah ay u geesatay Abuu Mansuur, waxaana laga filayaa Xasan Sheekh in uu qaado tallaabo xabsiga looga saarayo Abuu Mansuur.
Cabdicasiis Laftagareen Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaan dhankiisa ku faraxsaneyn dedaalada socda ee xabsiga looga soo saarayo Abuu Mansuur, waxa uuna Laftagareen halis u arkaa in Sheekh Mukhtaar lasoo daayo kuna laabto Baydhabo.
Abuu Mansuur ayaa taageerayaal badan ku leh gudaha deegaanada Koonfur Galbeed,waxaana suurto gal ah in marka la daayo ku laabto Koonfur Galbeed halkaasna ka bilaabo olole siyaasadeed oo ka dhan ah Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Rejada soo laabashada Madaxweynaha waqtigiisa dhamnmaadka ku dhaw yahay ee Laftagareen ayaa aad u yaraatay markii uu meesha ka baxday Madaxweyne Farmaajo uu si weyn u taageeray uguna soo saaray Xildhibanao badan.
Previous Xasan Sheikh oo berrito xilkiisa la wareegidoona
Next Barnaamijka Ogaal (22- 05- 2022) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Ciidamada Israa’iil oo markale maanta weerar ku qaaday magaalada Jeniin – Radio Muqdisho
Jubbaland oo Hay’adaha samafalka kala hadashay u gurmashada dadka ay Abaaraha sameyeen – Radio Muqdisho
Turkiga oo ogolaaday in dalalka Sweden iyo Finland ku biiraan NATO
Halyeey Man City ah oo ka hadlay suurtogalnimada uu Sterling ugu dhaqaaqi karo Chelsea – Gool FM
H&M 2Q Sales SEK54.5B – MarketWatch
Ciidamada Israa’iil oo markale maanta weerar ku qaaday magaalada Jeniin – Radio Muqdisho June 29, 2022
Halyeey Man City ah oo ka hadlay suurtogalnimada uu Sterling ugu dhaqaaqi karo Chelsea – Gool FM June 29, 2022
H&M 2Q Sales SEK54.5B – MarketWatch June 29, 2022
Jubbaland oo Hay’adaha samafalka kala hadashay u gurmashada dadka ay Abaaraha sameyeen – Radio Muqdisho June 29, 2022
Turkiga oo ogolaaday in dalalka Sweden iyo Finland ku biiraan NATO June 29, 2022